Salesforce CEO inozivisa urongwa blockchain chigadzirwa - Blockchain News
Kubvumbi 9, 2018 arun
Salesforce ari kushanda ari chigadzirwa kunobva blockchain Michina, gore kadambari wekambani CEO akazivisa.
Marc Benioff, akavamba kambani iri 1999, akati “Ndakanga ndichifunga zvakawanda pamusoro zvinhu Salesforce kuti nzira kumativi blockchain, uye chii nzira Salesforce kuti kumativi cryptocurrencies uye sei isu chokuita zvose izvi,” akati.
Nepo asingadi kupa mashoko ari kuuya chigadzirwa, Benioff akati anotarisira “vane blockchain uye cryptocurrency mhinduro Salesforce uye vose makasitoma edu” pamberi Dreamforce – musangano Kambani kuchaita naHama on Sept muSan Francisco. 25.
Salesforce ari anozivikanwa nokuda kwayo gore kadambari Software kuti mutengi ukama utariri. The kambani akaita $10.5 mabhiriyoni kwemari mugore ndokuguma Jan. 31.
Join Salesforce sachigaro uye CEO Marc Benioff uye co-muvambi Parker Harris kuti Fireside Chat pamusoro masikati Wednesday. Uyai mibvunzo yako uye kuwana mhinduro akazvionera kubva havaoni kuti salesforce.com
Previous Post:Mexico iri kuva blockchain inobva zvaidiwa hurongwa
Next Post:Germany No. 2 Stock Exchange urongwa pakatanga of Crypto Trading App
Chivabvu 28, 2018 pa 1:52 PM